ခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အကြောညပ်နေသလား ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ – Popinvdo
ခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အကြောညပ်နေသလား ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပေးပါ
January 3, 2019 - by Admin 1
■ Sciatica ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ် တတ်သလဲ။
Sciatica ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ ဆေးပညာ မှာ ခြေထောက်အတွက်အရေးပါတဲ့ Sciatic အာရုံကြော ကို အစွဲပြုခေါ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ူLumbosacral Radicular Syndrome? Nerve root pain? Nerve root entrapment စသည်ဖြင့်လည်း သုံးနှုန်းပါတယ်။ လူတော်တော်များများလည်း တစ်သက် တစ်ခါဖြစ်ဖြစ် ကြုံဖူးလေ့ရှိကြပြီး အဓိကဖြစ်တတ်တာ ကတော့ ခြေထောက်တစ်လျှောက်၊ အထူးသဖြင့် ပေါင် နေရာနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒူးအောက်ပိုင်းက ခြေသလုံး ကြွက်သားတွေ၊ ခြေထောက်တွေအထိနာတာ၊ ထုံကျင် တာ စတာအပြင် ခါးအောက်ပိုင်းနာကျင်ကိုက်ခဲတာ မျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပြီး မလှုပ်မရှားနိုင်တာအထိလည်း ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဒါကိုပဲအရပ်ထဲမှာတော့ ပေါင်တန်း တယ်၊ အကြောညပ်တယ် စသည်ဖြင့်လည်းခေါ်တတ် ကြပြီး နာတာကျင်တာဟာ ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာချေတာ စတာနဲ့ <ြွကက်သားတွေအားစိုက်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာ ပို ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။
■ ဘာကြောင့် Sciatica ဖြစ်တတ်ကြသလဲ။ Sciatica ဖြစ်တာဟာ ခြေထောက်က Sciatica အာရုံကြောမကောင်းလို့ဆိုတာထက် သူ့ရဲ့မြစ် ဖျားခံရာ ခါးဆစ်ကျောရိုးမကြီးဆီကနာကျင်မှုဟာ အောက် ကိုဆင်းလာတတ်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Sciatica ဖြစ်သူတွေရဲ့ရာခိုင်နှုန်း ၉ဝဟာ ခါးဆစ်ရိုးကြားတစ်ခု နဲ့တစ်ခုမှာရှိပြီး ခါးဆစ်ရိုးတွေကို ချိတ်ဆက်ထောက် ပံ့ပေးထားတဲ့ဒစ်ပြားလေးတွေ (Inter-vertebral Disc) ကျွံပြီး ပင်မအာရုံကြော Nerve root ကို သွားဖိမိတာ ကြောင့်လို့ စာများမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးတဲ့ရောဂါတွေကတော့ ခါးဆစ် ရိုးအခေါင်းပေါက်ကျဉ်းတာ (Spinal Stenosis)၊ ခါး ကျောရိုးမှာအလုံးအကျိတ်ဖြစ်တာ(Tumours)၊ ကင် ဆာဖြစ်တာ၊ သို့မဟုတ် တခြားခန္ဓာကိုယ်တစ်နေရာရာ မှ ကင်ဆာက ခါးဆစ်ရိုးဆီပျံ့နှံ့လာတာ၊ ခါးဆစ်ရိုးတွေ နေရာလွဲချော်တာ (Spondylolisthesis)၊ ခါးဆစ်ရိုးမှာ တီဘီရောဂါဖြစ်တာနဲ့ ပြည်တည်တာစတဲ့ရောဂါတွေ ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုကတော့ Cauda Equina Syndrome ဆိုတာဖြစ်ပြီး ခါးဆစ်အာ ရုံကြောမကြီးရဲ့အောက်ဆုံးမှာဖြာထွက်တဲ့ Cauda Equina ဆိုတဲ့အာရုံကြောမျှင်တွေ အဖိခံရတာ၊ ထိခိုက် ခံရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကြောင့် အထက် မှာစာရေးသူဖော်ပြထားတဲ့Sciaticaလက္ခဏာတွေ အပြင် ဆီးမထိန်းနိုင်တာ၊ ဝမ်းမထိန်းနိုင်တာဆိုတာပါ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကြာလာရင် အကြောသေပြီး လေဖြတ်သလိုဖြစ်တတ်တာမို့ လျင်မြန်စွာကုသမှုခံယူ ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
■ Sciatica ဖြစ်တယ်ထင်ရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့လက္ခဏာတွေ လိုမျိုးခံစားလာရတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ နားလည်တတ် ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ သေချာအရင်ပြသသင့်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရုတ်တရက်ထဖြစ်တဲ့ Acute Sciatica တွေကို ရောဂါရာဇဝင်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အပေါ် မှာမူတည်ပြီး အရေးကြီးနိုင်၊ မကြီးနိုင်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ် ကြလေ့ရှိပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အခါ၊ လက္ခဏာ တွေဟာ ခြောက်ပတ်မှသည် ရှစ်ပတ်လောက်အထိ မသက် သာတဲ့အခါ၊ ခွဲစိတ်ကုသရမယ်ထင်တဲ့အခါမျိုးမှာမှ ကျော ရိုးကို CT scan ခေါ် ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်မျိုး သို့မဟုတ် MRI (သံလိုက်စက်ကွင်းသုံး) ဓာတ်မှန်မျိုးတွေကို ရိုက် ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါမှသာ ခါးဆစ်ရိုး ဒစ်ပြားကျွံတာ၊ ဘယ်နေရာနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ အာ ရုံကြောကိုသွားရောက်ဖိနေတာစတာတွေကို ပိုမိုသိရှိ နိုင်မှာပါ။ ■ Sciatica ကို ဘယ်လိုတွေကုသနိုင်သလဲ။ ကြီးကြီးမားမားရောဂါအခံကြောင့် မဟုတ် ဘူးဆိုရင်တော့ Acute Sciatica ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Conservative treatment ခေါ် မခွဲမစိတ်တဲ့ကုသနည်း တွေကို သုံးစွဲကြပါတယ်။ နှစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာတွေ သက်သာလာတတ်ပါတယ်။ ကုသဖို့အ တွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ နာလို့ကျင်လို့ဆိုပြီး အိပ်ရာထဲမှာပဲ အနားယူနေတာထက် လှုပ်ရှားမှုရှိနေ ဖို့ကို ကုသနည်းမှာ အားပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူ တော်တော်များများဟာ ခါးနာ၊ ခြေထောက်နာဆိုတဲ့ အခါမှာ ကြောက်ပြီးတော့ မလှုပ်မယှက်တော့ဘဲ အနား ယူနေလေ့ရှိတတ်ကြတယ်။Sciatica မှာကတော့ လှုပ် လှုပ်ရှားရှားနေထိုင်တာဟာ ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆို ကြပါတယ်။ (ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ခါးနာတာ၊ ခြေထောက် နာကျင်တာဟာ တခြားရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်နေမလား ဆိုတာကို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ အရင်ဆုံးပြသစစ် ဆေးကြည့်ဖို့တော့ လိုပါတယ်)။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပါရာစီတမောလို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးမျိုးနဲ့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ လို အပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးမျိုးတွေကို ဆရာဝန်က ညွန်ကြားပေး ပါလိမ့်မယ်။ သင့်တော်တဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေး တာ၊ ခါးဆစ်ရိုးထဲကို စတီးရွိုက်ဆေးထိုးတာ(Epidural Steroid Injection)၊ ခါးကို အပူအိတ်ကပ်ပေး တာစတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ကုသရာမှာ သုံးစွဲနိုင် ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေဟာ သေချာပေါက်သက်သာ မယ်လို့တော့ အာမခံထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ် ခါတစ်ရံမှာ အဖြစ်များတတ်တဲ့ ခါးဆစ်ရိုးဒစ်ကျွံတာ အတွက်ကို ခွဲစိတ်ကုသမှသာ ခြေထောက်နာ၊ ခါးနာသက် သာရာ ရတော့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ခွဲစိတ်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှ ဆေးဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ၃၂နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးလူနာတစ်ယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေရေးသား ထားတဲ့Sciatica ကိုယ်တွေ့ခံစားချက်လေးတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ထိုစာစုတိုလေးမှာ သူမဟာ အပန်းဖြေခရီး တစ်ခုထွက်ရင်း ခါး<ြွကက်သားတွေနာကျင်တာကနေ အစပြုပြီး ခါးအောက်ပိုင်းတွေ ကိုက်နေတတ်တာ၊ ခြေ ထောက်မှာ ထုံကျဉ်နေတာစတာတွေကို ကိုးလလောက် ခံစားလိုက်ရကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ဟာ နာကျင်တာအင် မတန်ဆိုးရွားလာတဲ့အတွက် အိမ်ကနေတောင် ဘယ်မှ မသွားနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက MRI ဓာတ် မှန်ရိုက်ခိုင်းကြည့်တဲ့အခါ မှာ ခါးဆစ်ရိုးအဆစ်ဒစ် ပြားတစ်ခု တော်တော်ကြီး ကျွံနေတာကို တွေ့လိုက် ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း လက္ခဏာတွေ ပိုဆိုးလာ တာနဲ့ သူခွဲစိတ်မှုခံယူလိုက် ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပိုင်းမှာ ခါးနာတာတွေ၊ ခြေ ထောက်နာတာတွေ တ ဖြည်းဖြည်းပြန်သက်သာ လာပြီး လုံးဝပြန်ကောင်း သွားတယ်။ အလုပ်လည်း ပြန်သွားနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်း ကျင်နဲ့ပြန်လည်ထိစပ်နိုင် လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လအနည်းငယ်ကြာတဲ့အ ခါမှာ လက္ခဏာတွေပြန် ပေါ်လာတယ်။ အရင်မခွဲ စိတ်ခင်လောက်ကတော့ မဆိုးပေမယ့် နောက်ထပ် MRI ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ မှာ ဒစ်ပြားနှစ်ခုအနည်း ငယ်စီကျွံနေတာနဲ့ အခြား ဒစ်ပြားနှစ်ခုကတော့ မ ကောင်းဘဲဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒုတိယ အကြိမ်ခွဲစိတ်နိုင်ဖို့ကတော့ နည်းနည်းစောင့်ရဦးမယ် ဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီး က ပြောပြပါတယ်။ သူမ လည်း ဒီကြားထဲမှာ နာ တာ၊ ကျင်တာနဲ့ စိတ်ဒုက္ခ ရောက်ရတာနဲ့ တော်တော် လေးအကျပ်ရိုက်နေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်Sciatica ပျောက်ဖို့အတွက် တစ်ခေါက်ခွဲစိတ်ထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နာမယ်ဆိုရင်တော့ ထပ်ပြီးတော့ စမ်းသပ်ဖို့ လိုရင်လိုအပ်မှာမျိုး၊ ခွဲစိတ်ရမှာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်တော့ ပေါင်တန်း တယ်၊ ခါးနာတယ်ဆိုတာကို ရမ်းသမ်းပြီးတော့ နင်း တာနှိပ်တာ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ လွယ်လွယ် ဝယ်ပြီးသက်သာရုံမျှ ကြာရှည်စားနေတာမျိုးကို ရှောင် ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ သေချာနားမလည်ဘဲနဲ့ တလွဲနှိပ်မိ ရင် ခါးရိုးဆစ်ကိုပိုပြီးဒဏ်ဖြစ်စေမှာဖြစ်သလို အကိုက် အခဲပျောက်ဆေးတွေကို ဒီတိုင်းစွဲသောက်နေရင်လည်း ဆေးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုခံရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဘေး ဖြစ်နိုင်တဲ့Sciatica လား၊ ပြန်ပျောက်လောက်မယ့် Sciatica လားဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အ ကြောညပ်သလိုဖြစ်ရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများနဲ့ သေချာကုပါဟုလည်း အကြံပြုလိုပါကြောင်း။
အမြိုးသမီးနှငျ့ကနျြးမာရေး ခါးနာ၊ ပေါငျတနျးပွီး အကွောညပျနသေလား
အရငျတဈပတျခနျ့က စာရေးသူနဲ့ senior ဆရာ ဝနျအဈမတဈယောကျနဲ့ စကားပွောဖွဈကွ တော့ သူကစာရေးသူကို ခါးနာ၊ ပေါငျတနျးတဲ့အကွောငျးလေးရေးပါလားလို့ အကွံပေးပါတယျ။ ဘယျသူမဆို လမျးလြှောကျရတာမကောငျးဘူး။ လှုပျရှားသှားလာရ တာ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ငါဘာဖွဈပွီလဲမသိဘူးဆိုပွီး အလနျ့တကွားဖွဈတတျကွတယျ။
Sciatica ဖွဈတယျဆိုတာဟာ ဆေးပညာ မှာ ခွထေောကျအတှကျအရေးပါတဲ့ Sciatic အာရုံကွော ကို အစှဲပွုချေါထားတဲ့အခွအေနတေဈရပျဖွဈပါတယျ။ူLumbosacral Radicular Syndrome? Nerve root pain? Nerve root entrapment စသညျဖွငျ့လညျး သုံးနှုနျးပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားလညျး တဈသကျ တဈခါဖွဈဖွဈ ကွုံဖူးလရှေိ့ကွပွီး အဓိကဖွဈတတျတာ ကတော့ ခွထေောကျတဈလြှောကျ၊ အထူးသဖွငျ့ ပေါငျ နရောနဲ့ တဈခါတဈရံမှာ ဒူးအောကျပိုငျးက ခွသေလုံး ကွှကျသားတှေ၊ ခွထေောကျတှအေထိနာတာ၊ ထုံကငျြ တာ စတာအပွငျ ခါးအောကျပိုငျးနာကငျြကိုကျခဲတာ မြိုးလညျးဖွဈတတျပွီး မလှုပျမရှားနိုငျတာအထိလညျး ဖွဈတတျကွတယျ။ ဒါကိုပဲအရပျထဲမှာတော့ ပေါငျတနျး တယျ၊ အကွောညပျတယျ စသညျဖွငျ့လညျးချေါတတျ ကွပွီး နာတာကငျြတာဟာ ခြောငျးဆိုးတာ၊ နှာခတြော စတာနဲ့ <ွှကကျသားတှအေားစိုကျထုတျရတဲ့အခါမှာ ပို ဆိုးတတျကွပါတယျ။ ■ ဘာကွောငျ့ Sciatica ဖွဈတတျကွသလဲ။ Sciatica ဖွဈတာဟာ ခွထေောကျက Sciatica အာရုံကွောမကောငျးလို့ဆိုတာထကျ သူ့ရဲ့မွဈ ဖြားခံရာ ခါးဆဈကြောရိုးမကွီးဆီကနာကငျြမှုဟာ အောကျ ကိုဆငျးလာတတျတာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ Sciatica ဖွဈသူတှရေဲ့ရာခိုငျနှုနျး ၉ဝဟာ ခါးဆဈရိုးကွားတဈခု နဲ့တဈခုမှာရှိပွီး ခါးဆဈရိုးတှကေို ခြိတျဆကျထောကျ ပံ့ပေးထားတဲ့ဒဈပွားလေးတှေ (Inter-vertebral Disc) ကြှံပွီး ပငျမအာရုံကွော Nerve root ကို သှားဖိမိတာ ကွောငျ့လို့ စာမြားမှာဖျောပွကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး တခွားဖွဈနိုငျခွရှေိသေးတဲ့ရောဂါတှကေတော့ ခါးဆဈ ရိုးအခေါငျးပေါကျကဉျြးတာ (Spinal Stenosis)၊ ခါး ကြောရိုးမှာအလုံးအကြိတျဖွဈတာ(Tumours)၊ ကငျ ဆာဖွဈတာ၊ သို့မဟုတျ တခွားခန်ဓာကိုယျတဈနရောရာ မှ ကငျဆာက ခါးဆဈရိုးဆီပြံ့နှံ့လာတာ၊ ခါးဆဈရိုးတှေ နရောလှဲခြျောတာ (Spondylolisthesis)၊ ခါးဆဈရိုးမှာ တီဘီရောဂါဖွဈတာနဲ့ ပွညျတညျတာစတဲ့ရောဂါတှေ ပါ။ အရေးကွီးတဲ့ရောဂါအခွအေနတေဈခုကတော့ Cauda Equina Syndrome ဆိုတာဖွဈပွီး ခါးဆဈအာ ရုံကွောမကွီးရဲ့အောကျဆုံးမှာဖွာထှကျတဲ့ Cauda Equina ဆိုတဲ့အာရုံကွောမြှငျတှေ အဖိခံရတာ၊ ထိခိုကျ ခံရတဲ့အခါမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီရောဂါကွောငျ့ အထကျ မှာစာရေးသူဖျောပွထားတဲ့Sciaticaလက်ခဏာတှေ အပွငျ ဆီးမထိနျးနိုငျတာ၊ ဝမျးမထိနျးနိုငျတာဆိုတာပါ ဖွဈလာမယျဆိုရငျတော့ ကွာလာရငျ အကွောသပွေီး လဖွေတျသလိုဖွဈတတျတာမို့ လငျြမွနျစှာကုသမှုခံယူ ဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ■ Sciatica ဖွဈတယျထငျရငျ ဘာလုပျသငျ့သလဲ။ အထကျမှာဖျောပွထားတဲ့လက်ခဏာတှေ လိုမြိုးခံစားလာရတဲ့သူတဈယောကျဟာ နားလညျတတျ ကြှမျးတဲ့ဆရာဝနျနဲ့ သခြောအရငျပွသသငျ့ပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ရုတျတရကျထဖွဈတဲ့ Acute Sciatica တှကေို ရောဂါရာဇဝငျနဲ့စမျးသပျကွညျ့တဲ့အပျေါ မှာမူတညျပွီး အရေးကွီးနိုငျ၊ မကွီးနိုငျဆိုတာကို ဆုံးဖွတျ ကွလရှေိ့ပါတယျ။ လိုအပျမယျထငျတဲ့အခါ၊ လက်ခဏာ တှဟော ခွောကျပတျမှသညျ ရှဈပတျလောကျအထိ မသကျ သာတဲ့အခါ၊ ခှဲစိတျကုသရမယျထငျတဲ့အခါမြိုးမှာမှ ကြော ရိုးကို CT scan ချေါ ကှနျပြူတာဓာတျမှနျမြိုး သို့မဟုတျ MRI (သံလိုကျစကျကှငျးသုံး) ဓာတျမှနျမြိုးတှကေို ရိုကျ ကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျရလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ ခါးဆဈရိုး ဒဈပွားကြှံတာ၊ ဘယျနရောနဲ့ ဘယျလောကျအထိ အာ ရုံကွောကိုသှားရောကျဖိနတောစတာတှကေို ပိုမိုသိရှိ နိုငျမှာပါ။ ■ Sciatica ကို ဘယျလိုတှကေုသနိုငျသလဲ။ ကွီးကွီးမားမားရောဂါအခံကွောငျ့ မဟုတျ ဘူးဆိုရငျတော့ Acute Sciatica ဖွဈတဲ့အခါမှာ Conservative treatment ချေါ မခှဲမစိတျတဲ့ကုသနညျး တှကေို သုံးစှဲကွပါတယျ။ နှဈပတျလောကျအတှငျးမှာ လက်ခဏာတှေ သကျသာလာတတျပါတယျ။ ကုသဖို့အ တှကျ ပထမဆုံးအနနေဲ့ကတော့ နာလို့ကငျြလို့ဆိုပွီး အိပျရာထဲမှာပဲ အနားယူနတောထကျ လှုပျရှားမှုရှိနေ ဖို့ကို ကုသနညျးမှာ အားပေးကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူ တျောတျောမြားမြားဟာ ခါးနာ၊ ခွထေောကျနာဆိုတဲ့ အခါမှာ ကွောကျပွီးတော့ မလှုပျမယှကျတော့ဘဲ အနား ယူနလေရှေိ့တတျကွတယျ။Sciatica မှာကတော့ လှုပျ လှုပျရှားရှားနထေိုငျတာဟာ ပိုမိုအကြိုးရှိနိုငျတယျလို့ဆို ကွပါတယျ။ (ဒါကွောငျ့ မိမိရဲ့ခါးနာတာ၊ ခွထေောကျ နာကငျြတာဟာ တခွားရောဂါတှကွေောငျ့ ဖွဈနမေလား ဆိုတာကို နားလညျတတျကြှမျးသူနဲ့ အရငျဆုံးပွသစဈ ဆေးကွညျ့ဖို့တော့ လိုပါတယျ)။ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ ပါရာစီတမောလို အကိုကျအခဲပြောကျဆေးမြိုးနဲ့ သောကျသုံးနိုငျပါတယျ။ လို အပျမယျဆိုရငျတော့ ပိုမိုပွငျးထနျတဲ့အကိုကျအခဲပြောကျ ဆေးမြိုးတှကေို ဆရာဝနျက ညှနျကွားပေး ပါလိမျ့မယျ။ သငျ့တျောတဲ့ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးမြားပွုလုပျပေး တာ၊ ခါးဆဈရိုးထဲကို စတီးရှိုကျဆေးထိုးတာ(Epidural Steroid Injection)၊ ခါးကို အပူအိတျကပျပေး တာစတဲ့နညျးလမျးတှကေိုလညျး ကုသရာမှာ သုံးစှဲနိုငျ ပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးတှဟော သခြောပေါကျသကျသာ မယျလို့တော့ အာမခံထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တဈ ခါတဈရံမှာ အဖွဈမြားတတျတဲ့ ခါးဆဈရိုးဒဈကြှံတာ အတှကျကို ခှဲစိတျကုသမှသာ ခွထေောကျနာ၊ ခါးနာသကျ သာရာ ရတော့တာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီနရောမှာတော့ ခှဲစိတျတာ နဲ့ပတျသကျပွီး ဗွိတိသြှနိုငျငံမှ ဆေးဂြာနယျတဈခုမှာ ၃၂နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးလူနာတဈယောကျရဲ့ရှုထောငျ့ကနရေေးသား ထားတဲ့Sciatica ကိုယျတှခေံ့စားခကျြလေးတဈခုကို ပွနျလညျမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ ထိုစာစုတိုလေးမှာ သူမဟာ အပနျးဖွခေရီး တဈခုထှကျရငျး ခါး<ွှကကျသားတှနောကငျြတာကနေ အစပွုပွီး ခါးအောကျပိုငျးတှေ ကိုကျနတေတျတာ၊ ခွေ ထောကျမှာ ထုံကဉျြနတောစတာတှကေို ကိုးလလောကျ ခံစားလိုကျရကွောငျးကိုဖျောပွထားပါတယျ။ နောကျပိုငျး မှာတော့ သူ့ရဲ့ညာဘကျခွထေောကျဟာ နာကငျြတာအငျ မတနျဆိုးရှားလာတဲ့အတှကျ အိမျကနတေောငျ ဘယျမှ မသှားနိုငျ ဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဆရာဝနျကွီးက MRI ဓာတျ မှနျရိုကျခိုငျးကွညျ့တဲ့အခါ မှာ ခါးဆဈရိုးအဆဈဒဈ ပွားတဈခု တျောတျောကွီး ကြှံနတောကို တှလေို့ကျ ရပွီး နောကျပိုငျးမှာလညျး လက်ခဏာတှေ ပိုဆိုးလာ တာနဲ့ သူခှဲစိတျမှုခံယူလိုကျ ပါတယျ။ ခှဲစိတျပွီးနောကျ ပိုငျးမှာ ခါးနာတာတှေ၊ ခွေ ထောကျနာတာတှေ တ ဖွညျးဖွညျးပွနျသကျသာ လာပွီး လုံးဝပွနျကောငျး သှားတယျ။ အလုပျလညျး ပွနျသှားနိုငျပွီး ပတျဝနျး ကငျြနဲ့ပွနျလညျထိစပျနိုငျ လာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး လအနညျးငယျကွာတဲ့အ ခါမှာ လက်ခဏာတှပွေနျ ပျေါလာတယျ။ အရငျမခှဲ စိတျခငျလောကျကတော့ မဆိုးပမေယျ့ နောကျထပျ MRI ရိုကျကွညျ့တဲ့အခါ မှာ ဒဈပွားနှဈခုအနညျး ငယျစီကြှံနတောနဲ့ အခွား ဒဈပွားနှဈခုကတော့ မ ကောငျးဘဲဖွဈနတောကို တှလေို့ကျရတယျ။ ဒုတိယ အကွိမျခှဲစိတျနိုငျဖို့ကတော့ နညျးနညျးစောငျ့ရဦးမယျ ဖွဈကွောငျး ဆရာဝနျကွီး က ပွောပွပါတယျ။ သူမ လညျး ဒီကွားထဲမှာ နာ တာ၊ ကငျြတာနဲ့ စိတျဒုက်ခ ရောကျရတာနဲ့ တျောတျော လေးအကပျြရိုကျနတေယျ လို့ သိရပါတယျ။ ဒါကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့Sciatica ပြောကျဖို့အတှကျ တဈခေါကျခှဲစိတျထားပွီးဖွဈပမေယျ့ နောကျတဈခေါကျပွနျနာမယျဆိုရငျတော့ ထပျပွီးတော့ စမျးသပျဖို့ လိုရငျလိုအပျမှာမြိုး၊ ခှဲစိတျရမှာမြိုးလညျး ဖွဈတတျတယျဆိုတာကို သိထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိဂုံးခြုပျအားဖွငျ့တော့ ပေါငျတနျး တယျ၊ ခါးနာတယျဆိုတာကို ရမျးသမျးပွီးတော့ နငျး တာနှိပျတာ၊ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ လှယျလှယျ ဝယျပွီးသကျသာရုံမြှ ကွာရှညျစားနတောမြိုးကို ရှောငျ ကွဉျသငျ့ပါတယျ။ သခြောနားမလညျဘဲနဲ့ တလှဲနှိပျမိ ရငျ ခါးရိုးဆဈကိုပိုပွီးဒဏျဖွဈစမှောဖွဈသလို အကိုကျ အခဲပြောကျဆေးတှကေို ဒီတိုငျးစှဲသောကျနရေငျလညျး ဆေးတှရေဲ့ဆိုးကြိုးတှကေိုခံရပါမယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘေး ဖွဈနိုငျတဲ့Sciatica လား၊ ပွနျပြောကျလောကျမယျ့ Sciatica လားဆိုတာကို သိနိုငျဖို့ ခါးနာ၊ ပေါငျတနျးပွီး အ ကွောညပျသလိုဖွဈရငျ နားလညျတတျကြှမျးသူမြားနဲ့ သခြောကုပါဟုလညျး အကွံပွုလိုပါကွောငျး။
Previous Article မယုံနိုင်လောက်အောင် တစ်သက်လုံး မျက်မှန် လွတ်စေတဲ့အံ့သြဖွယ်ဆေးနည်း
Next Article မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအပေါ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဘယ်လိုမြင်သလဲ